ယီမင်နိုင်ငံ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းခံရသူ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသား ဆလေးရှင်း ဘုန်းတော်ကြီး Fr. Tom သည် ဆလေးရှင်းဂိုဏ်း၏မိခင်ဌာနချုပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
16 September 2017. Rome
၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက ယီမင်နိုင်ငံ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းခံရသူ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသား ဆလေးရှင်း ဘုန်းတော်ကြီး Fr. Tom သည် ဆလေးရှင်းဂိုဏ်း၏မိခင်ဌာနချုပ်သို့ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်ရောက်ရှိလာကာ သတင်းစာရှင်းလင်းခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆလေးရှင်းဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီး Fr Ángel Fernández Artime ကိုယ်တိုင်ကြိုဆိုရင်း အားပေးခဲ့သည်။ Fr. Tom သည် ရောမမြို့ (Vatican တွင်ရှိသော ဆလေးရှင်း ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် နေရင်း လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးကုသခြင်းများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သုံးနားရီလောက်ရှိသော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို အတိုချုပ်လောက်ပဲတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အချုပ်အနှောင်ခံရသော (၁၈) လအတွင်း မိမိအတွက် သတိရဆုတောင်းပေးကြသည့် သူတွေအားလုံး (လူမျိုး၊ ဘာသာမရွေး၊ လူသားအားလုံး) ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ကို ချုပ်နှောင်ကြသည်သူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကျေးဇူးကို သူတို့ခံစားရလို့ဖြစ်တယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် မိမိကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကြောက်စိတ်၊စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း အရာရာဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်၊ ကိုယ်တော်၏လက်တော်သို့ တပည့်တော်၏ဘဝကို လုံးလုံးလျားလျားအပ်နှံပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြန်လည်ဆုတောင်း အပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော (၁၈)လလုံးလုံးကို ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အခန်းငယ်လေးထဲမှာပဲနေရတယ်။ အစားအစာလည်းပုံမှန်စားရပါတယ်။ ပထမ ဆုံးထမင်းလာပို့တယ်ဆိုရင် မနက်၊ ဒုတိယအကြိမ်ထမင်းလာပို့ရင် ညလို့တော့ မှတ်ထားတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကြီးမားတဲ့ဖျားနာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ တစ်ခါက အစောင့်တစ်တစ်ယောက်ကမေးတယ်။ အသက်ဘယ်လောက်ရှီပြီလဲ မေးတာကို အသက် (၅၈)နှစ်ရှိပြီလို့ဖြေလိုက်တော့ ဘာမှမပိုနှင့် ခင်ဗျားအသက် ၈၅ ကျော်နေရအုံးမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။
ခြေလှမ်းသုံးလေးလမ်းလောက်လှမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့အခန်းထဲမှာနေရပေမယ့် ကိုယ်လက်အင်္ဂါလက်ကျင့်ခန်းတွေပိုမှန်လုပ်တယ်။ ကျွန်ုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ဘုရားသခင်ရဲ့သနားခြင်းကြောင့် သူတို့ဆီကနေတဆင့်ရရှိပါတယ်။ ကောင်းကောင်းအိပ်ရတယ်။ အိပ်ချိန်ကတော့ နေ့ရောညရောပဲ၊ ဆုတောင်းရင်းနှင့်ပဲနေတယ်။တစ်ရေးနိးလာရင် “ကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပြန်ပြီးတော့မအိပ်ခင်အချိန်အတွက် ကိုယ်တော့်ကိုကျေုးဇူးတင်ရင်း အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရင်လည်း ကိုယ်တော့်ထံတော်သို့အပ်နှံပါတယ်လို့ ဆုတောင်းတယ် (ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘယ်အချိန် ဘာလာလုပ်မယ်ဆိုတာမသိရဘူးလေ)။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မိစားပူဇော်ခြင်ြး့ပုဖို့ မုန်ု့နှင့် စပျစ်ရည်မရှိပေမယ့် ရွက်ဆိုရတဲ့မေတ္တာတွေကို အလွတ်ဆိုပြီးနေ့တိုင်းစိတ်အားဖြင့် မိစားပူဇော်တယ်။ ဆုတောင်းတဲ့အခါတိုင်း အားလုံးအတွက် ရဟန်းမင်းကြီးအတွက်၊ ကျွန်ပ်ရဲ့ညီတော်နောင်တော် ဆလေးရှင်းများ၊ အကြီးအကဲများ၊ ဆရာတော်ကြီး၊ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအတွက်၊ အသက်ရှင်တဲ့သူများ၊ သေလွန်တဲ့သူများ၊ ကျွန်ုပ်လွတ်မြောက်ဖို့ရန် ကြိုးပမ်းပေးကြသောသူများအားလုံးအတွက် စသဖြင့် အချိန်တိုင်းဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ဘုရားရှင်ကို ကျေးဇူးတင်တယ်၊ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Fr.Leo Mang, SDB